Kukiyada Chewy Double Chocolate Chip - Sugar Geek Show - Kukiyada
Kukiyada Chewy Double Chocolate Chip
Waxaan ku beddelay buskudkeyga shukulaatada DOUBLE buskudka shukulaatada DOUBLE! Kukiyadaani waa shukulaato jecel oo riyadoodu rumowdaa! Taajir, shukulaato, qoyan, oo jilicsan. Asal ahaan bunni qaab cookie ah. Kaliya qaado 20 daqiiqo inaad sameyso.
Kukiyadaani waa kuwo fiican oo calaliya oo si dhammaystiran ula socda dhalo dhaadheer oo caano qabow. Samee Dufcad weyn ka hor waqtiga kulan gaar ah ama barafee oo buskud qabo markasta oo ay hammuunku ku dhacaan!
INGREDIENTS LABA-SHAKHLAD SHIP COOKIE COOKIE
Ma jiraan wax isku murugsan oo ku saabsan buskudyadan laba-jibbaaran ee shukulaatada ah, xitaa uma baahnid aaladda wax lagu qaso, waxaad ku wada qaban kartaa gacanta. Farqiga kaliya ee udhaxeeya buskudyadan iyo buskudkeyga shukulaatada qaawan ayaa ah wax yar oo subag ah iyo xoogaa budada koko ah. Waxaan isticmaalayaa HERSHEY’S laakiin waxaad isticmaali kartaa nooc kasta oo budada kookaha ah oo aad rabto.
TILMAAMAHA LABAAD EE SHAKHLIGA SHIIFADA COOKIE
Tallaabada 1 - Waxaad ku dhalaalisaa subagga weel dhexdhexaad ah, ku dar budada kookaha walaaq ilaa inta ay siman tahay oo la isku darayo.
Talo-siin: Ku darista budada kookaha iyo subagga marka hore waxay ka caawineysaa dib-u-qoynta budada kookaha oo buskudkaaga way fiicnaan doontaa oo qoyan tahay.
Tallaabada 2 - Ku dar subagga la dhalaaliyay iyo budada kookaha, sonkorta buniga ah, iyo sonkorta cad baaquli ee qasarkaaga istaagga. Lifaaqa suufka, isku qas xawaaraha dhexdhexaadka ah illaa 1-2 daqiiqo illaa ay ka ifayso oo qalafsan tahay. Xaaqin baaquli marka loo baahdo.
Talo-siin: Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa aaladda gacanta lagu shiido haddii aadan haysan isku-darka istaagga, kaliya isku walaaq muddo dheer oo waxaad ku tagtaa muuqaal iyo is-waafajin halkii aad waqtiga ka heli lahayd.
Tallaabada 3 - Ku dar ukunta qolka kuleylka oo mar labaad ku dar xawaare dhexdhexaad ah 1-2 daqiiqo illaa ay ka fududaanayso oo hawo tahay. Weelka xoq.
Tallaabada 4 - Inta aad ku dhex qasmeyso hoose, ku dar vanilj, milix, budada dubista, bur, iyo shukulaatada, iskuna qas ilaa inta la isku darayo. Ku dhammee gacanta si aad u hubiso inaysan jirin jeebbo bur ah oo haraaga.
sida loo sameeyo ubax keeg
Tallaabada 5 - Hadda bilow inaad kululeyso foornadaada350ºF (177ºC).
Tallaabada 6 - Iyada oo # 20 qaaddo cookie ah, ku qaybi 2 kubbadood oo cajiin ah oo buskudkoodu dhan yahay ku darso xaashida wax lagu dubo ee ay ku daboolan yihiin warqadda xarkaha leh. Waxaan jecelahay inaan kubbada dusheeda ku shubo baaquli jajab shukulaato ah si aan xitaa ugu helo shukulaatada intaa ka badan buskudka! Dhig iyaga dheriga xaashida qiyaastii 3 ″ kala fog.
Waxaa ugufiican in loo daayo buskudyadan inay fadhiistaan ​​heerkulka qolka illaa 30 daqiiqo si waqti loogu siiyo burka inay nuugaan dareerayaasha. Tani waxay kaa caawin doontaa yareynta xaddiga faafitaanka. Waxaad sidoo kale ku qaboojin kartaa qaboojiyaha 30 daqiiqo haddii aad rabto in buskudku sii fido xitaa wax ka yar.
Tallaabada 7 - Ka dub350ºF (177ºC)10 daqiiqo.
Tallaabada 8 - Ku qabooji 5 daqiiqo digsiga, ka dibna u wareeji sariir qaboojiye si aad u qaboojiso inta harsan. Ku keydi weel hawadu kululaato heerkulka qolka illaa 5 maalmood.
Kukiyada Shukulaatada Chewy Peppermint
Kukiyadaha Chip Shukulaatada Master
Maariin fudud oo Guriga lagu Sameeyo
Kukiyada dhalaalaya ee dhalaalaya
Kukiyada shukulaatada laba jibbaaran ee ku habboon jacaylka shukulaatada runta ah noloshaada! Kaliya waxay qaadataa 20 daqiiqo in la sameeyo! Waqtiga Diyaarinta:10 daqiiqado Waqtiga karinta:10 daqiiqado Wadarta Waqtiga:labaatan daqiiqado Kalori:194kcal
▢1 1/8 koobabka (8 ounces) subag aan cusbo lahayn dhalaalay (2 ulood + 2 Tbsp subagga)
▢1 koob (7 ounces) sonkorta khafiifka ah buuxiyey
▢1 koob (7 ounces) sonkorta granulated buuxiyey
▢laba koobabka (10 ounces) bur ujeedo oo dhan
▢3/4 koob (2.6 ounces) budada kookaha dabiici ah
▢laba koobabka (12 ounces) shukulaatada semi-macaan
Waxaad ku dhalaalisaa subagga weel dhexdhexaad ah, ku dar budada kookaha walaaq ilaa inta ay siman tahay oo la isku darayo.
Kudar subagga dhalaalaya iyo budada kookaha, sonkorta buniga ah iyo sonkorta cad baaquliga isku darkaaga istaaga. Ku dar lifaaqa suufka oo ku qas xawaaraha dhexdhexaadka ah illaa 1-2 daqiiqo illaa ay ka fududaanayso oo qalafsan tahay. Weelka xoq. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa qalabka wax lagu qaso haddii aanad lahayn qasacad istaag ah, isku walaaq muddo dheer oo waxaad ku tagtaa muuqaalka iyo joogtaynta halkii waqtiga.
Ku dar ukunta heerkulka qolka oo isku walaaq markale dhexdhexaad ilaa 1-2 daqiiqadood illaa ay ka noqoneyso mid fudud oo hawo leh. Weelka xoq.
Intaad isku dhex darin, ku dar vanilj, milix, soodhaha, bur iyo shukulaatada, iskuna qas ilaa inta la isku darayo. Ku dhammee gacanta si aad u hubiso inaysan jirin meelo bur ah.
Hada bilow kuleylka foornadaada ilaa 350ºF (180ºC). Waxaa ugufiican in loo daayo buskudyadan inay fadhiistaan ​​heerkulka qolka illaa 30 daqiiqo si waqti loogu siiyo burka inay nuugaan dareerayaasha. Tani waxay kaa caawin doontaa yareynta xaddiga faafitaanka. Waxaad sidoo kale ku qaboojin kartaa qaboojiyaha 30 daqiiqo haddii aad rabto in buskudku sii fido xitaa wax ka yar.
Iyada oo # 20 qaaddo cookie ah, ku qaybi 2 kubbadood oo cajiin ah oo buskudka lagu kariyey ah ku duub xaashida dubista ee ay ku xardhan tahay warqadda xaaqitaanka. Qiyaastii 9 buskud oo loogu talagalay heer kasta oo ah xaashida '9' x13 '. Ku dhaji xoogaa shukulaato dheeri ah oo dheeri ah si aad u qurxiso! Cuntadani waxay sameyn doontaa ilaa 27 buskud ah.
Dubo 350ºF (180ºC) 10 daqiiqo.
Ku qabooji 5 daqiiqo digsiga, ka dibna u wareeji sariirta qaboojinta si aad u qaboojiso inta harsan. Ku keydi weel hawadu kululaato heerkulka qolka illaa 5 maalmood.
U daa cajiinkaaga cookie inuu naso 30 daqiiqo faafin ka yar Ku keydi kubbadaha cajiinkaaga buskudka dusha saxanka ka dibna ku rid bac balaastik ah. Mid mid u dub 12 daqiiqo daqiiqad kasta oo aad rabto buskud cusub oo la dubay!
U adeegida:1buskud|Kalori:194kcal(10%)|Kaarboohaydraytyada:27g(9%)|Protein:labag(4%)|Dufan:9g(14%)|Dufan Dufan:6g(30%)|Kalastarol:38mg(13%)|Sodium:105mg(4%)|Kaliumperyamper:73mg(laba%)|Fiber:1g(4%)|Sonkor:17g(19%)|Vitamin A:288IU(6%)|Kaalshiyam:17mg(laba%)|Bir:1mg(6%)
sida loo sameeyo goop leh bur
sida loo isticmaalo garaam cabirka dhijitaalka ah
waa maxay dhaldhalaalka la cuni karo ee laga sameeyay